Nkọwapụta Semalt Olee otú iji mee ka ọtụtụ n'ime SEO na Email Marketing Integration
Email Marketing bụ ụzọ dị irè iji gbasaa mgbasa ozi maka ikike,na iwulite mmekorita ka mma n'etiti ndi ahia site n'inwe ihe omuma, bara uru, ma obu obi uto. Mgbe ị nwere ike ichena SEO bụ ihe dị mkpa maka ogo ogo weebụ na peeji nke rịzọlt, ọ na-egosi na ọ dị mgbagwoju anya ma dịgasị iche.
Artem Abgarian, Onye Nlekọta Ọrụ Ndị Ahịa nke Ọkachamara Ọrụ Ntanetị na-akọwa njikọ dị n'etiti ahịa ahịa email na SEO ma kenye ndụmọdụ na otu esi esonye ha n'ụzọ dị irè.
Ndị na-eweta ọrụ email na-enye adreesị IP na nlekota ọrụ.Ịgbaso iwu CAN-SPAM na-eme ka saịtị na ISPs dịkwuo ukwuu. Ihe ndị na-abụghị nke nnabata na-apụta na ọnụego nnapụta dị ala, ma ọ bụ onye na-ede akwụkwọ.Ụfọdụ ndị na-agụ akwụkwọ na-ahọrọ ịgụta ozi ha n'ụdị ederede, yabụ ọ bụ ihe dị mma iji nweta ederede ederede maka email HTML. Na-aga n'ihu n'ihuozi mgbasa ozi ma e jiri ya tụnyere ịmalite na ha na-ebelata ohere nke "ịpụ apụ."
Ọdịnaya kwesịrị inwe njikọ kpọmkwem na peeji nke ọdịda, nke nwereozi banyere ngwaahịa, ọrụ, na n'ọkwá, ma na-arụ ọrụ ederede ebumnuche. Ịdebe ọdịnaya iji gụọ isiokwu ụfọdụnke mmasị na-eme ka ohere ilele anya na itinye aka. Mgbe ị na-emeso ndị na-ege ntị ka ukwuu, na-eme ihe iji mee ihe ngosi,ọdịmma ma ọ bụ mmasị dị mkpa dịka ọ na-ebelata ọnụego ụba. SEO na-eme njem gaa na saịtị ndị nwere igbe nrịba ama a na-ahụ anyamepee ndepụta. N'ikpeazụ, gụnyere mgbasa ozi ọha na eze na-ejikọta na ozuzu ozi na-eme ka ndị ọbịa na ndị natara ọ bụla n'ọkwá..
Ụzọ dị mfe iji bulie ụdị ngosi template gụnyere:
SEO Best Practices dịka ịchọta akụkọ, utu aha,ederede, akwụkwọ ahụ, na ihe odide arịlịka nke jikọtara na ibe ụfọdụ na saịtị ahụ. Foto ndị ekwesịghị ị gafere 600 pixels ka ọtụtụnaanị ndị na-agụ akwụkwọ na-ese foto na-agbanyụ. Ihe ntinye ederede na ihe oyiyi nyere ndi ederede aka ịghọta ihe okwu.Ọrụ "View in Browser" kwesịrị ịpụta na imewe template ma ọ bụrụ na ndị na-agụ akwụkwọ nwere nsogbu ịgụ akwụkwọ email.
Ederede Canonical na-emetụta mgbe otu onye chọrọ iji ebe nchekwa makablọọgụ ma ọ bụ akwụkwọ akụkọ gaa na ebe nrụọrụ weebụ nke engines na-enyocha nwere ike ịnweta. Ha na - agwa engine search ka ha na - emeso ibe di ka URL choro,nakwa na ọdịnaya niile ga-alaghachi na ya.
E-Newsletter Archive bụ ọbá akwụkwọ nke akwụkwọ akụkọ niile ebipụtarana isiokwu niile dị mkpa. A na-ahazi aha niile na mgbakọ na-akpọ aha site na iji okwu bụ isi na njikọ Onye ọ bụla na nke ọ bụla.
Mobile Marketing chọrọ ka ndebiri iji kwekọọ na nyocha ihu igwena ngwa ndị na-agbanwe agbanwe nke na-agbanwe maka ihe nchọgharị mkpanaka.
Isiokwu Isiokwu na-enyere ndị na-agụ aka ịghọta ọdịnaya email n'ihuọbụna meghee ya. Ha ekwesịghị inwe ntakịrị ihe ha na SEO ga - eme ma nwee mmasị na onye ahụ na - anabata ya.
Emmanuel ozi. Vidio ndị mejupụtara dị ka oku na-enyere ndị na-agụ akwụkwọ akamụtakwuo ma nyere aka na ntughari.
Ndepụta Mgbasa Ozi na iji nchịkọta Google.
Ozi ịntanetị anaghị ejedebe ọdịnaya ọ bụrụhaala na ha na-agbaso CAN-SPAMachọrọ ma debe ha dị mfe na mkpụmkpụ. Buru n'uche imepụta ha dị ka ndị na-eleta anya na SEO n'uche. Nankwalite dị n'ihu na Google, nchịkọta email ga-adị mkpa maka azụmahịa dị ka ndị ọrụ agaghị mkpa ịga leta weebụsaịtịihe omume ha weghaara Source .